Uyenza njani i-GIF: isifundo esifutshane esicacisayo sokwandisa i-GIF | Abadali be-Intanethi
Uyenza njani iGIF
UNerea Morcillo | 06/05/2022 17:00 | ngokubanzi, Tutorials
Umthombo: Spartan Geek
Ngalo lonke ixesha siphendula umyalezo ngendlela eyonwabisayo nedlamkileyo, sisebenzisa uhlobo lwefomathi esele ixhaphake kakhulu phakathi kwabasebenzisi bezicelo ezinje ngoWhatsapp okanye iinethiwekhi zentlalo ezinje ngoTwitter okanye uFacebook.
Kule posi siza kuthetha nawe malunga nefomathi ye-GIF, ifomathi esele isefashonini ixesha elide phakathi kwabo banxibelelana kunye nokusefa kwi-intanethi. Ukuba ungomnye waba bantu bangakwaziyo ukuyeka ukuphendula imiyalezo ngale fomati, unethamsanqa, kuba siza kukubonisa isifundo esincinci.l malunga nendlela yokwenza i-GIF ngokukhawuleza kwaye kulula.
Ukongeza, siya kukubonisa ngeendlela ezahlukeneyo ukwenza oko, ukuba unezixhobo ezifana nePhotoshop
1 Ifomathi yeGIF
2 Isifundo: Uyenza njani i-GIF
2.1 Indlela 1: NgePhotoshop
2.2 IFomu 2: Kwi-Intanethi
3 Iiwebhusayithi zokukhuphela i-GIF
3.1 Imifanekiso kaGoogle
Umthombo: Inkcubeko ye-SEO
Ifomathi yeGIF luhlobo lwefomathi yomfanekiso kodwa iyasebenzisana, oko kukuthi, iyakwazi ukuvelisa kwakhona umfanekiso kwimizuzwana emininzi, ayiquki isandi kwiimveliso kwaye ubungakanani balo buncinci kunefayile zePNG okanye zeJPG.
Ziifomati ezidla ngokumelwa kumajelo osasazo ahlukeneyo e-intanethi afana neenethiwekhi zentlalo. Bakwaphawulwa ngokucenga kakhulu, oko kukuthi, Zidlulisela iimvakalelo neemvakalelo ngendlela ecacileyo nemfutshane. Iinkcukacha ezinomdla kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba sithetha ngokuthengisa, sinokuthi zizinto ezivelisa inani elikhulu lokutyelela, ekubeni zibamba ingqalelo yoluntu. Ukongeza, zidla ngokuba zizinto ezilawula ukufikelela kwinani eliphezulu labaphulaphuli, ke ukuba uyazinikela okanye usebenza kwezinye iinethiwekhi zentlalo, ungasebenzisa le nto ukunika ugxininiso kunye nokubaluleka kwiprofayile yakho.
Ziziqalelo ezithe, njengoko sele sitshilo ukutsala umdla woluntu, ngoko ziluncedo kakhulu kwishishini lakho le-intanethi. Kwakhona, njengoko zilula ngobunzima, ungasebenzisa uninzi njengoko ufuna, kuba ziifayile ezicinezelweyo ukuze zisetyenziswe.
Ziyinxalenye yehlabathi lokusebenzisana njengoko zenziwe ngothotho lwemifanekiso ehamba imizuzwana emi-5. Ingcaciso etsala ingqalelo enkulu ukususela Awudingi kakhulu ukuchaza into ofuna ukuyithetha.
Okwangoku, uyafumaneka amaphepha ewebhu ahlukeneyo apho ungafumana khona okona kulungileyo okanye eyona inika umdla kwaye ukwazi ukuyikhuphela. Ngaphandle kwamathandabuzo, luncedo kuba unokufumana zonke iintlobo zeendidi kunye neemvakalelo, enyanisweni i-Twitter sele inethala leencwadi le-GIFS.
Okokugqibela kodwa kuncinci, kunomdla kwaye kubalulekile ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwe-GIF olufanelekileyo kwisihlandlo ngasinye, umzekelo, ukuba uthetha ngezemidlalo okanye nasiphi na isihloko esinxulumene nehlabathi lezemidlalo, inika umdla ukuyila iiGIFS okanye uziphendle ngendlela ezabelana ngayo ngomxholo ofanayo. Ziinkcukacha ezithi, ngokubonwayo, zityebise kakhulu. Ukongeza, ixesha ngalinye amawaka kunye namawaka amagcisa ajoyina lo mkhwa, umkhwa othi yonke imihla uvelise izigidi kunye nezigidi zabaphulaphuli kwabo bayinxalenye yenethiwekhi.
Isifundo: Uyenza njani i-GIF
Umthombo: I-industry Podcast
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokucinezela i-GIF. Ukwenza oku, siza kukubonisa iindlela ezimbini ezahlukeneyo ngokupheleleyo zokwenza. Ukuba unezixhobo zePhotoshop, ukhetho lokuqala lunokuba lunomdla kakhulu kuwe.
Kwelinye icala, ukuba awunayo Photoshop, ungakhathazeki kuba siye saqulunqa uhlobo lwesicwangciso B. Ilula kakhulu kwaye Uya kubona ukuba ngamanyathelo alula unokukwazi ukwenza ngaphandle kwengxaki.
Ukulungiselela i-GIF kuluncedo kakhulu ukuba usebenza rhoqo ngolu hlobo lwefomathi, oluba luncedo kakhulu.
Indlela 1: NgePhotoshop
Umthombo: Ikhompyuter kakhulu
Ngaphambi kokuqala, kubalulekile ukuba uyazi ukuba, ukuba awunayo iPhotoshop, ungafaka inguqulo yesilingo kwisixhobo sakho kwaye uqale ukuyenza. Unobuninzi beentsuku ezisi-7 zokuyizama kwaye ungayifumana inika umdla ngakumbi.
Into yokuqala esiza kuyenza kwimeko yokungabi nayo, kukuyifaka. Nje ukuba siyifakile, siya kuqhubeka ukuyiqhuba okanye sivule usetyenziso kwisixhobo sethu. Nje ukuba sivulwe, kufuneka sikhethe kuphela i-GIF esifuna ukuyicinezela, singayikhuphela kwi-intanethi ukuba asikabi nayo okanye uyikhangele ngokulula kwilayibrari yethu yeefayile.
Ukuqala ukuyilungisa kudweliso lwenkqubo siya kukhetho de Oovimbaemva koko siya ku ukuthumela ngaphandle kwaye ekugqibeleni siyakunika ukhetho lwe gcina kwiwebhu
Nje ukuba ifestile ivuliwe, kuya kufuneka silungise kuphela ezinye izinto ezinje ngemibala kwaye, ngaphezu kwayo yonke, ubungakanani bomfanekiso esifuna ukuwunikezela. Ngoko, lawula ukunciphisa ubungakanani bomfanekiso kunye nobunzima bawo, ekubeni umfanekiso omkhulu, ngoko ke, unzima kakhulu.
Sikwanazo ezinye iisetingi zesibini ezifana nokhetho lwesetingi yewebhu kunye nomgangatho ophantsi wolungiselelo. Ngale ndlela ukwalawula ukunciphisa umgangatho kwaye ngenxa yoko ubunzima befayile.
Nje ukuba sigqibe ukwenza i-GIF yethu, into ekufuneka siyenzile kukuyigcina kwisixhobo sethu, kuba oku kufuneka siqondise kwakhona iwindow, kwaye nqakraza kukhetho gcina.
Khumbula ukugcina iifayile zakho kwenye indawo kwisixhobo sakho ekulula ukuzifumana. Sikucebisa ukuba soloko uzigcina ekuqaleni, kwi-desktop, ngale ndlela akuyi kuba nzima ukuzifumana kamva.
Siyathemba ukuba ibe luncedo kuwe.
IFomu 2: Kwi-Intanethi
Indlela yesibini kukwenza kwi-Intanethi, kuba oku sikubeke kuluhlu, iphepha lewebhu elisetyenziswa ngabasebenzisi abaninzi ukucinezela okanye ukuguqula iifayile. Kuluncedo kakhulu kuba sihlala silushiya omnye umzuzu olu hlobo lwezenzo, ngaphandle kokwazi, inokwenziwa ngokukhawuleza nangokulula.
Iloveimg liphepha lewebhu kwaye sisixhobo esihle kakhulu sokuguqula iJPG, GIF okanye iifayile zePNG.
Ukwenza oku, kuya kufuneka uyikhangele kuphela kwisikhangeli, cofa kwikhonkco layo eliphambili, kwaye kujongano lwayo, cofa kwakhona kukhetho. Khetha imifanekiso. Xa sikhethiwe kufuneka sinikele kuphela compress imifanekiso, kwaye inkqubo ngokwayo yenza intshukumo ngokuzenzekelayo.
Iiwebhusayithi zokukhuphela i-GIF
Oku ngokungathandabuzekiyo lolona khetho lusetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi, unokufumana imifanekiso yazo zonke iintlobo ngegama nje elingundoqo kwi-browser egqwesileyo kwi-intanethi yonke. Ukongeza, ikwabandakanya iithegi ezahlukeneyo zesibini ukuze ungaphoswa nantoni na oyifunayo.
Unazo zonke iindidi zeendidi, kufuneka ukhethe lowo uthanda kakhulu kwaye ngokuzenzekelayo Amakhulukhulu ee-GIFS ezinopopayi ziya kuvela kwiscreen sakho.
Lelinye lawona maqonga apheleleyo e-intanethi xa kufikwa ekukhangeleni ii-GIFs ezinoopopayi ezinomdla. Ukuze uyiqonde ngcono, luhlobo lwendawo apho unokulayisha khona ezo ozenzileyo, okanye ukhuphele kwi-intanethi, kwaye kwangaxeshanye, unokukhuphela ezo zabanye abasebenzisi. Masithi ifana nohlobo lwenethiwekhi yoluntu, kodwa isekelwe kuphela kwi-GIFS.
Ukongeza, kufuneka kwakhona kongezwe ukuba i-gif nganye oyikhuphelayo yenziwe ngothotho lweelebhile ukuze ungaphoswa nantoni na.
I-Giphy yeyabasebenzisi be-intanethi, elona qonga libalulekileyo nelinomdla lokufumana ezona GIFS zibalaseleyo. Enye yezona nkcukacha zinomdla malunga nolu hlobo lweqonga kukuba unokuzikhuphela kwaye uzifake ngokuzenzekelayo kwiwebhusayithi yakho, isicelo okanye inethiwekhi yoluntu ngendlela ekhululekile, elula kwaye ekhawuleza kakhulu.
Ngokungathandabuzekiyo iyamangalisa ongenakuyiphosa, kwaye ngakumbi ukuba uzijonga njengomntu osebenza kakhulu ngolu hlobo lwefayile okanye ifomathi. Indlela entsha yokufumana ukonwabisa kwi-intanethi kwaye oko sele kube sefashonini ngabasebenzisi.
Ngokomgaqo wawusisiseko sekhibhodi ebandakanya olu hlobo lweefayile eziza kwabelwana nabanye abasebenzisi. Kodwa okwangoku, yinxalenye yeqonga le-GIFS elikwi-intanethi elisetyenziswa kakhulu ngabo banxibelelana kwi-intanethi. Inoluhlu olubanzi lweendidi ezahlukeneyo kakhulu phakathi kwazo, Ukongeza, ngaphandle kokuya phambili, ikwanesikhangeli esibanzi, into eya kuba nomdla kakhulu ukuba usebenza kwiintanethi zentlalo kwaye ufuna amawaka kunye namawaka ezi fayile kunye neefomathi.
Ngamafutshane, ezi ibe ngamanye awona maphepha asimahla apho unokukhuphela ii-GIFS, kwaye ngokucofa nje kube kanye.
Ukuphucula i-GIF ngumsebenzi olula, kwanele ukuba nezixhobo eziyimfuneko zokwenza. Njengoko sele sibonile, awudingi iindleko ezikhethekileyo, kuphela ukuba ukhetho lwakho kukwenza ngePhotoshop.
Awusenaso isizathu sokuyeka ukusebenzisa ezi zinto kwiinethiwekhi zakho zentlalo, kuba enkosi kubo, uya kuba nakho ukubamba ingqalelo yabaphulaphuli bonke.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi ngolu hlobo lwefomathi, oluxhaphake kakhulu phakathi kwabaqulunqi, abaqulunqi bephepha lewebhu, abathengisi, njl. Kwaye ngaphezu kwako konke, sikwanethemba lokuba i-tutorial encinci esiyiyileyo iya kuba luncedo olukhulu kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyenza njani iGIF
Imizekelo yeelogo zesikolo